Olan’ny fanaovan-gazety Malagasy Vonon-kanampy amin’ny famahana azy ny CAREA
Hatramina mpisolovava dia mahamenatra fa misy tsy mahafantatra ny atao hoe Compagnie des arbitres rapporteur et expert agrée pour les cours et tribunaux de Madagascar na CAREA, izany hoe mpahay ny sehatra misy azy avy ary vita fianianana hatramin’izao, hoy ny mpikambana ao anatin’izany, Razaka Oliva.
Raha sanatria misy olana eo amin’ny fitsarana mikasika ny didy tokony ho avoakany dia izahay no mpanazava azy na « éclaireur du juge ». Ny mpitsara, ny mpisolovava ary ny CAREA no toko 3 mahamasa-nahandro ny fitsarana. 60 taona izao no nisian’ity rafitra ity saingy tsy fantatr’olona, raha ny fanazavany, satria tsy avelan’ny lalàna manao dokambarotra. Satria moa manam-pahaizana (bacc+4 fara fahakeliny) no ao dia manao tatitra siantifika mikasika ireo tranga ara-pitsarana nataonay izahay, hoy hatrany ny tenany. Maro ireo raharaham-pitsarana izay efa nanampian’ny CAREA ireo mpitsara ny fandraisana fanapahan-kevitra momba azy, hoy ity solontenan’ny mpanao gazety ao anatin’izany ity, saingy hatreto aloha dia mbola tsy voakasik’izany ny asantsika, hoy izy. Miandry izahay hoe raha sanatria misy olana ny mpanao gazety dia mba hanampy amin’ny famahana ny raharaha izahay, hoy hatrany ny fanazavany.